OTK- M1 500W Standard Urban Electric Car Bike, China OTK- M1 500W Standard Urban Electric Car Bike Manufacturers, Suppliers, Factory - Transporttọ Transporttọ (Changzhou) Ebike Co., LTD
Moto: 48V-500W Batrị: 48V 11.6AH Ngosiputa: LCD
Max Speed: 25km / h Ogo: 50-70km Jụọ: 5-6h
Ìhè: Ikanam Ibu: 200kg Arọ: 43kg
You na-achọ ka a na-ebu ngwongwo ibu maka ebumnuche ma ọ bụ maka ịba uru? You bu n'obi inwe ihe nke emeputara iji weta ibu ma obu umuaka gi? Igwe igwe eletrik bụ nhọrọ pụtara ìhè maka njem maka njem ị na-aga ebe ị na-aga ngwa ngwa karịa iji ụgbọ ala na-agagharị n'okporo ụzọ.
OTKARGO M1 bụ igwe eletriki igwe eletrik maka ahazi, ụdị ọkọlọtọ dị ike, yana ihe ndị ka mma yana motọ, yabụ ị nwere ike ịnya ya ebe ọ bụla na-enweghị nchegbu gbasara ịla n'iyi. Ejiri 500V 48Ah Batrị lithium-Ion wuru igwe eji ebu ibu nke 11.6W nke emebere maka oke ibu na ịnya ogologo oge. 7-ọsọ Shimano drivetrain na n'ibu diski brek enye kwụsie ike na maneuverability.
The kasị dị irè àgwà nke bike bụ pedal-aka maka mgbalị draịva mbanye mgbalị. O nwere ihe ruru 50km. N'ihe banyere ogo na nkọwapụta, ọ bụ igwe eletriki eletriki kachasị mma ma dị ọnụ ala ị nwere ike ịzụta. Ọ bụ igwe eletriki igwe eletrik zuru oke yana igwe eletriki eletriki eletrik maka ụlọ ọrụ.
General NWA usoro akụkụ
Max. Kwuru 25 km / h (EU) Motor 500W ogologo 234cm
nso Ihe dịka 50-70KMS Display LCD obosara 42cm
Max ibu 200KGS batrị 48V 11.6AH elu 90cm
Oge chaji 5-6H
Oche ihu 20``
BECR A ỌHESR.